အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “အီဂျစ် mummy အတွက်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အခေါင်းတလားထဲကနေပေါ်ထွက်လာ 2,300 နှစ်ပေါင်း” New York မှာအလန် Yuhas ကရေးသားခဲ့သည်, theguardian.com သောကြာနေ့ 12 ဒီဇင်ဘာလတွင်အပေါ်များအတွက် 2014 05.00 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
တစ်ဦးက mummy အတွက်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဟာသူ့ရဲ့ခေါင်းကနေပေါ်ထွက်လာ 2,300 တော်တော်များများတင်းမာနေအချိန်လေးပြီးနောက်နှစ်ပေါင်းယခုအပတ်သိပ္ပံပညာရှင်များသစ်သားအဖုံးရုပ်သိမ်းအဖြစ်.
ကိုယျခန်ဓာ, ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး JP ဘရောင်းနှင့်ချီကာဂိုဖျော်ဖြေမှုပြတိုက်မှာသုံးအခြားသိပ္ပံပညာရှင်များအားဖြင့်ရှေးခေတ် box ထဲကဂရုတစိုက်ဆွဲထုတ်, Minirdis အမည်ရှိတဲ့ 14 နှစ်အရွယ်အီဂျစ်လူကလေးပိုင်. ဘရောင်းနှင့်သူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုပြုပြင်နှင့်တစ်ဦးမယ့်ပြပွဲမှ display နှင့်ခရီးသွားကြောင့်တည်ငြိမ်ရန် mummy နှင့်ခေါင်းပေါ်အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်.
"ဒါဟာအောင်အတော်လေးဦးနှောက်အာရုံကြောင်,"ဘရောင်းဂါးဒီးယန်းကပြောပါတယ်, သူ့အဖွဲ့တစ်အပိုင်းအစအဖြစ်အဖုံးရုတ်သိမ်းပေးရန်တစ်ဦးပီပီသတ္တုပုခက်အသုံးပြုဘယ်လိုပြန်ခေါ်. တဦးတည်းကလူ့ရုပ်ကြွင်းအတူလုပ်ကိုင်သောအခါ "ထိုသို့တဦးတည်းကိုပိုပြီးဦးနှောက်အာရုံကြောကို,"ဟုသူကဆိုသည်, သူတို့အငယ်ရအဖြစ် "နှင့်ပိုမိုထိခိုက်စေရရှိသွားတဲ့. သင်တို့သည်ဤအတိုဖြတ်ခဲ့ကွောငျးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏ဘဝခဲ့သဘောပေါက်။ "
JP ဘရောင်းနဲ့သူ့အဖွဲ့ဓာတ်ပုံ Minirdis ၏မမျမီရုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ backside, ယဇ်ပုရောဟိတ်၏သားခဲ့သူတစ်ဦးအသက် 14 နှစ်အရွယ်အီဂျစ်ကောင်လေးတစ်ယောက်. ဓါတ်ပုံ: ချားလ်စ် Rex Arbogast / AP
အောင်မင်း၏ယဇ်ပုရောဟိတ်၏သားအဖြစ် Minirdis အမည်ရှိခေါင်းတခုတခုအပေါ်မှာကမ္ပည်း, ဗဟိုအီဂျစ်မွေးဖွားသောဘုရား. Minirdis '' ခန်ဓာကိုယ် Akhmin ၏မြို့အနီးမြစ်တစ်လျှောက်ကြီးမားသောသင်္ချိုင်းနေရာတွင် 19 ရာစုနှောင်းပိုင်း၌တွေ့, US မှာ display ကိုအပေါ်မမ်မီအများအပြားထဲကနေလာဘယ်မှာ.
သူနေထိုင်ခဲ့ခဲ့, Minirdis ဖွယ်ရှိယဇ်ပုရောဟိတ်ကြပြီ, ဘရောင်းကပြောပါတယ်.
Mummification ကို "သည်အများအားဖြင့်ခဲ့တာ 10 ရှေးခေတ်အီဂျစ်၏ရာခိုင်နှုန်းက ", ဘရောင်းကပြောပါတယ်, ထိုကဲ့သို့သောယဇ်ပုရောဟိတ်အဖြစ်, ၎င်းတို့၏မိသားစုများ, တော်ဝင်မိသားစုနှင့်တော်ဝင် '' အနီးကပ်ဆုံးပိုင်းနဲ့. Minirdis '' ခေါင်း 1920 အတွင်းကွင်းဆင်းပြတိုက်ရောက်လာ.
ကွီးကွပျမှူးခေါင်းတလားထဲမှာသေးငယ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်က x-ray ကိုမြင်လျှင်, ပထမဦးဆုံးမှာသုတေသီတွေကကိုယ်ခန္ဓာကိုအမျိုးသမီးတစ်ဦးပိုင်ထင်. ထိုအခါမှန် CT Scan ဖတ်က "အတိအကျလိင်တံ" ထင်ရှား, ဘရောင်းကပြောပါတယ်, သောခေါင်းတလားပေါ်အထီးနာမညျအကွောငျးသူတို့၏စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများအဆုံးသတ်. သိပ္ပံပညာရှင်များ Minirdis သေဆုံးသွားပုံကိုမသိကြပါပေမယ့်, ကကောင်လေးတစ်ယောက်ပျောက်ပျက်သောအခါအခေါင်းတလားတစ်ခုအရွယ်ရောက်ပြီးသူအဘို့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏နှင့် repurposed ခဲ့ပုံပေါ်.
အီဂျစ်နတ်ဘုရားမတစ်ပါး Nut, ကောင်းကင်ယံမှဘာသာပြန်ဆိုရာ, Minirdis ၏ခေါင်းတလား၏အောက်ဆုံးရှိခြယ်သသည်. ဓါတ်ပုံ: ချားလ်စ် Rex Arbogast / AP
အဖုံးကိုဖယ်ရှားလိုက်တဲ့အခါ, အသင်းတပြင်လုံးကိုခေါင်းခွဲလဲကြလိမ့်ကြောက်ရွံ; ယခု, ဘရောင်းနှင့်သူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်ကိုယျခန်ဓာနှင့်ခေါင်းနှစ်ခုလုံးထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်၏စိန်ခေါ်မှုနှင့်ရင်ဆိုင်ရ. အချို့သောသစ်သား - သူတို့ကခေါင်းတလားထဲမှာရှိသမျှကိုအပျက်အစီးများမှတဆင့်ရှာဖွေမည်, အချို့ထုပ်ပိုးပြီး, အချို့သောလူ့ - နှငျ့အတူတူကအားလုံးကိုချပြီး၏နူးညံ့သိမ်မွေ့သောအလုပ်ကိုစတင်. "သင်တစ်ဦး jigsaw ပဟေဠိကို ယူ. လိမ်ကြောင့်ဆုတ်ပြီးတော့ကြောင့်ကျန်ရစ်ခဲ့လျှင် 2,300 နှစ်ပေါင်း, ကျနော်တို့ကဒီမှာလုပ်နေလုပ်နေအဘယျသို့အခြေခံအားဖြင့်ဖွင့်,"ဘရောင်းကပြောပါတယ်.
ကွန်ဆာဗေးတစ်တတ်နိုင်သလောက်မူရင်းပစ္စည်းအဖြစ်တာသုံးစွဲဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မည်, နှင့်ဘရောင်းသူတို့ကိုသုံးမဆိုခေတ်သစ်ပစ္စည်းကိုတာရှည်ခံပေမယ့်ရှေးခေတ်အီဂျစ်၏နည်းစနစ်ဖို့ "စာနာ" မသာဖြစ်လိမ့်မည်ဟုဆိုသည်. သူတို့ကရှေးခေတ်အီဂျစ်ရဲ့ style အတွက်ရုပ်ကြွင်း rewrap နှင့်အလောင်းကျိုးမပဲ့-bits ပြန်ပေးမည်.
အဆိုပါ mummy ရဲ့ shroud နှင့်ခေထြားမျက်နှာဖုံးသင်္ဂြိုဟ်စဉ်နှင့်နှစ်ပေါင်းများစွာပျက်စီးခဲ့သည်, နှင့်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး၏အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုတွေထဲကတစ်ခုဖွဲ့စည်း. "တစ်ခုချင်းစီကို object ကိုထိထိရောကျရောထူးခြားသည်,"ဘရောင်းကပြောပါတယ်, "နှစ်ပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာ၏ကျော်တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲကြောင်းလက်ရာလက်၏ကွဲပြားခြားနားသောအစဉ်အလာအပေါငျးတို့သမျိုး" နဲ့.
ကမ္ဘာတဝှမ်းဒါအနည်းငယ်မမ်မီနှင့်အတူ, ပျက်စီးလွယ်သောအကြွင်းအကျန်များကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်အတွေ့အကြုံနှင့်အတူကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များပင်အလွန်ရှားပါးတဲ့ဖြစ်ကြပြီးထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး '' အလုပ်သုတေသနလုပ်ငန်း blends, ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ရှေးဟောင်းသုတေသန. အဆိုပါကွင်းဆင်းပြတိုက်ဘရောင်းကကူညီရန်အ Peabody Essex ပြတိုက်မှ Mimi Leveque ဆောင်ခဲ့ကြ၏, အဘယ်သူသည်ဤသူသည်သူ၏ဒုတိယခေါင်းဒါပေမယ့်သူ့ရဲ့ပထမဆုံး mummy ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်.
အဆိုပါပြပွဲ, "mummy: ထိုလှေနျပွီးနော၏ပုံများ ", ထက်ပိုပြီးပြသပါလိမ့်မယ် 20 အပိုငျးအ၏မမ်မီနှင့်များစွာ, နှင့်လာမည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း Los Angeles မြို့နှင့်သဘာဝတရားနှင့်သိပ္ပံများ၏ Denver ပြတိုက်၏သဘာဝသမိုင်းပြတိုက်မှသွားလာရန်မျှော်လင့်နေသည်.